Uyazivikela u-DStv ngokuphindaphinda izinhlelo – LIVE Express
Msizi Zondi | 30 March 2016 | Entertainment, News |
Inkampani engabanikazi be-DStv, u-MultiChoice, isiphumele obala yazivikela ngokuphindaphindwa kwezinhlelo ezizodwa eziteshini zabo, nokwiyinto esime emphinjeni amanye amakhasimende abo.
i-DStv ingenye yezinkampani ezinikezela ngeziteshi zikamabonakude ezikhokhelwayo kuleli kanti iyona isikhondlakhondla kulo mkhakha wama-Digital Satellite Television njengoba inamakhasimende alinganiselwa ku-5.5 million eNingizimu Afrika.
Kwincazelo eshicilelwe kwi-website yakwa-MultiChoice le nkampani ithi akusiye wonke umuntu onenkululeko yokubukela into ayifunayo noma inini uma efuna.
Ithi iningi lamakhasimende ayo ngabantu abaphila izimpilo ezimatasatasa kakhulu. “Abanye bethu bayehla bayanyuka emini kanti abanye basebenza ebusuku futhi abanye bamatasa kakhulu ukubukela izinhlelo zabo abazithandayo uma ziba semoyeni. Leso ngesinye sezizathu sokuthi sinikeze amakhasimende ethu ithuba elingaphezu kwelilodwa lokubuka lokho abakufunayo,” kuchaza u-MultiChoice.
“Ezinye izinhlelo ziphindwa kakhulu, kodwa isibalo sokuphindwa siyahluka kwisiteshi nesiteshi. Ezinye iziteshi, ezinjenga no-Mnet (101), zona zifakwa kwi-DStv Premium package. Lezi ziteshi zinikeza izinhlelo zakamumva kanye nama-movie, kwesinye isikhathi ngesikhathi esisodwa nesiteshi sethu esitholakala eMelika. Lokhu kusho ukuthi amakhasimende ethu e-DStv Premium yiwona abona izinhlelo zakamumva kuqala.”
Lokhu kusho ukuthi izinhlelo eziqala ukubonakala ku-DStv Premium kuqala ziphinde zibonakale emva kwezinyanga ezimbalwa kwamanye ama-package afana ne-DStv Compact.
u-MultiChoice uthi iziteshi zabo zonke, ikakhulukazi iziteshi zama-movie, ziyaphoqeleka ukuthi zixube izinhlelo ezindala kanye nezintsha. Lokhu kungenxa yokuthi i-Hollywood yenza ama-movie alinganiselwa ku-600 ngonyaka – nokungalinganiselwa kumahora angu-1 200 uma edlala.
Bathi i-channel ngayinye edlala ama-movie idinga ama-movie angadlala amahora ayizi-8 760 ukuze ikwazi ukudlala ama-movie amasha usuku nosuku, unyaka wonke.
Le nkampani iluleke amakhasimende ayo ukuthi azitholele i-DStv Explora njengoba labo abasebenzisa lobu buchwepheshe bona bekhala ngokuthi bagcina sebeshoda ngaso isikhathi sokubukela yonke into njengoba bekwazi ukuzigcinela izinhlelo esezidlalile ukuze babuye bazibukele ngesinye isikhathi.
Okunye okuvezwe yile nkampani ukuthi abantu abaningi bachitha isikhathi esiningi bebukela iziteshi ezizodwa abazithandayo nokwenza bagcine sebephuthelwa izinhlelo ezintsha ezidlala kwezinye iziteshi.
UKhune uphuke ithambo ebusweni, uzobona uchwepheshe – Chiefs
BUKA: UMbalula uthi azobhekana nomthetho amaphoyisa ‘adla’ imali